Homeसमाचारनायिका स्वेता खड्काबारे नराम्रो बोलेपछि सुस्मा कार्कीले धु’लाई भेटिन्, अनि धुरुधुरु रुँदै प्रहरी कहाँ पु’गिन् (भिडियो हेर्नुहोस्)
February 2, 2021 admin समाचार 6453
नायिका सुष्मा कार्की आफ्ना अभि’ब्यक्तिका कारण चर्चित छन् । उनले खेलेका फिल्म र गरेका आइटम डान्स भन्दा उनले बोलेका कुराले उनलाई च’र्चामा ल्याइ रहन्छन् । तर चर्चा सधैं सका’रात्मक हुन्छ भन्ने छैन । उनले अरुको आलो’चना गर्दा उनको पनि आ’लोचना हुने गर्छ ।
पछिल्लो समय यस्तै भएको छ । उनले धु’लाई भेटेकी छिन् । यो कुराको पुष्टी पनि नायिका आफैंले गरेकी हुन् । नायिका सुष्मा कार्कीेमाथि काठमाण्डौको ल’ण्डन पब क्याफेमा यस्तो घटना भएको थियो । नायिका स्वेता खड्काकी बहिनी आरती खड्का र पत्रकार उत्सव रसा’इलीले यस्तो गरेको आ’रोप कार्कीको छ ।
प्रहरी परिसरबाट बाहि:रिंदै गर्दा सुष्मा कार्कीले भनिन्, “म र उत्सव रसाईली बीच केही कुरामा विवाद भएको थियो जुन सा’मान्य नै हो तर उत्सवले मलाई केटाहरु ल्याएर कु’टा’उ’छु देखि उक्त पबबाट निकाल्नु भन्दै ध’म्का’उ’न थाले । त्यस पश्चात स्वेता खड्काले समेत मलाई मुख छा’डेकी छिन र स्वेताको बहिनी आरती ख’ड्काले भने मलाई हा’त हा’लेकी छिन् ।”
सुष्माका अनुसार अरु जे भएपनि ‘हा’त हा’ल्नुहु’दैन थियो त्यसैले आफू प्रहरीमा उजु’री दिन आएकी हुन् । सुष्माका अनुसार घ’टनाको सबै भिडियो आफूसंग रहेको र प्रहरीलाई बुझाएको स’मेत बताएकी छिन् । नायिका सुष्मा कार्कीले घट’नाको भिडियो रेकर्ड समेत भएको बताइन् । उनले भनिन् ‘मसँग सबै भिडियो रेक’र्डहरु छ ।
अब, जे बोल्छ भिडियोले नै बोल्छ ।’ नायिका स्वेता खड्काले आफूलाई न’राम्रो शब्द प्रयोग गरेको सुष्माले दा’बी गरेकी छिन् । सो समयमा उत्सव, आरतीको सा’थमा नायिका स्वेता खड्का र उनका पति विज’येन्द्र सिंह राउत क्लबमा भएको उनको दावी छ । उनी घट’ना सुनाउन प्रहरीकहाँ पुगेकी छिन् । – इताजा खबरबाट
February 16, 2021 admin समाचार 6110
January 15, 2021 admin समाचार 6397
तपाईलाई बाइक चलाउन आउछ ? वा तपाईको परिबारमा कुनै १ जनालाई त अबश्य बाइक चलाउन आउछ होला नी ? हैन र ? हो आज हामी यसैबारे अचम्मको कुरा गर्दैछौ । कुरा हो नुवाकोटका यि युवाको
June 15, 2021 admin समाचार 4793
हनुमान हनुमान्, अंजनेय र मारुति पनि० परमेश्व’रको भक्ति हिन्दू धर्ममा भगवानको भक्ति०को सबैभन्दा लोकप्रिय अवधारणाहरू मध्ये र भारतीय महाकाव्य रामाय’णमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यक्तिह’रू मध्ये एक हुन। उनी केही विचारहरूको अनुसार ११औँ अवतार रुद्रावतार९रुद्र ९ भगवान